Kuuriyada Waqooyi oo u diyaargaroobaysa weerar ay dalka Maraykanka ku qaadayso. | Salaan Media
Home Wararka Kuuriyada Waqooyi oo u diyaargaroobaysa weerar ay dalka Maraykanka ku qaadayso.
Kuuriyada Waqooyi oo u diyaargaroobaysa weerar ay dalka Maraykanka ku qaadayso.
London 29.3.13 (SM)Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalaheeda shishka dheer u diyaarinaysa weerar ay kula kacayso dalka Maraykanka kadib markii ay soo baxday warbixin cadaynaysa in ay diyaarado nooca qumbuladaha rida (Bomber) oo uu dalka Marakanku leeyahay ay hawada Kuuriyada Koonfureed tababar miltari ku qaadanayeen. Xiisadan dambe ayaa imanaysa kadib markii bilahan ugu dambaysay dalka Kuuriyada Waqooyi ay xabad joojin ay la lahayd Kuuriyada Konfureed kabaxday.
Wakaalada wararka ee KCNA oo laga leeyahay dalka K.Waqooyi ayaa ku dhawaaqday “ Waxaa hada sugan xiligii xisaabta lala dhamaystiri lahaa dalka Maraykanka”. Dhanka kalena Kuuriyada Konfureed oo ay dalka Maraykanka la xulufo ah baa sheegtay in malmihiin ugu dambaysay ay dareemeen dhaqdhaqaaq ciidan oo dhanka gantaalaha shiishka dheer oo ka socdna dhanka K.Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi oo uu hogaaminayo Kim Jong-Un ayaa dhawaan tijaabisay qubulad nukliyeer ah taaso uu dalka Maraykanku aad uga soo hor jeeday, In kasta oo aanay K.Waqooyi usuurto galin in bam nukliyeer ah oo lagu rakibi karo gantaal shiishkiisu dheer yahay. In kasta oo ciidanka W.Kuuriya uu leeyahay saad gantaalo ah oo ilaa magaaloyinka dalka Maraykanka qaarkood gaadhaya taas oo ku kaliftay dalka Maraykanka in uu difaaca gantaalada kuwa ku sugan xeebaha galbeedka Maraykanka sii xoojiso.